अाफ्नै सहयोद्धकी जीवनसाथी अस्पतालमा छटपटाइरहँदा प्रचण्डदेखि बादलले फर्केर हेरनन्, जनताले के अाश गर्ने ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
अाफ्नै सहयोद्धकी जीवनसाथी अस्पतालमा छटपटाइरहँदा प्रचण्डदेखि बादलले फर्केर हेरनन्, जनताले के अाश गर्ने ?
काठमाडौं, २९ फागुन – जीवनकुरमा बिककी जीवनसाथी धनसरा बिकको अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ । काठमाडौंको मध्यवानेश्वरस्थित भेनस अस्पतालको अाइसियुबाट भेन्टिलेटरमा लगिएको छ ।
उपचारमा संलग्‍न चिकित्सकका अनुसार अाइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेपनि अावश्यक औषधि नभएका कारण सोँचेजस्तो सुधार भएको छैन । अस्पतालमै रहेका जीवनकुमार बिकले अाफूसँग भएको सबै रकम सकिएकोले अावश्‍यक समान र औषधि खरिद गर्न नसकेको बताए ।
बिकले अहिलेसम्म देश-जनता र समाजकै अाफू रात दिन लागेको तर श्रीमतीको उपचार गर्न नसक्दा खिन्नता महशुस भएको बताएका छन् । अाफूले चिनेको सबै नेताहरुको घरमा पुग्दा पनि कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
उनले सहयोगको लागि सबैसँग अाग्रह गरेका छन् । सहयोग गर्न चाहने वा सम्पर्क गर्न चाहनेको लागि जीवनकुमार बिकको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काठमाडौं गौशाला शाखामा रहेको खाता नं. १३४००३८८७६१० मा गर्न सक्नुहुनेछ भने ९८४८४८५५२४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।